Agaasimihii Horseedmedia oo la xiray | KEYDMEDIA ONLINE
Agaasimihii Horseedmedia oo la xiray
Wararka aynu ka heleyna Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobalka Bari ayaa sheegaya in maanta Maamul deegaameedka halkaasi ka taliya uu u dhaadhiciyay xabsi ku yaala Magaaladaasi Agaasimihii Warbaahinta Horseedmedia ee fadhigeedu ahaa Magaalada Boosaaso C/fitaax Jaamac Mire .
Maamulka Bari ayaa ku eedeeyay Idaacada Horseed media in ay wareysi ka qaaday wadaadka dagaalka kula jira ee lagu Magacaabo Max'ed Saciid Atam, iyadoona idaacadaasi ay tahay mid Madax banaan misna xaq u leh in ay sameyso dheelitir wareed fursadna ay siiso labada dhan ee dirirta ay u dhaxeyso.
Inta badan Wariyaasha iyo xarumaha Warbaahinada ee ku yaala Deegaanada Bari iyo Nugaal ayaa la kulma, cadaadis, caga jugleyn iyo howl hakin ay u geestaan kooxda ka talisa halkaasi.
Shalay galinkii Danbe ayeey aheyd markii ay gudaha u galeen Xarunta Warbaahinta Horseedmedia maleeshiya hubeysan oo ka amar qaadata Maamulka Bari isla markaana halkaasi ay ka kaxeesteen in ka badan 9 ka tirsan shaqaalaha Warbaahinta Horseedmedia.
Waxa uu sheegay Maamul deegaameedka in lagu xukumay Mr mire lix-sanadood oo xarig ah iyo Ganaax lacageed oo dhan $500 (Shan boqol oo Doolarka Maraykanka ah).
Dhawaan ayeey aheyd markii Maamulkaasi uu ku amray inuu joojiyo howashi Warbaahineed ee uu ka hayay Magaalada Garawe Wakiil wareedkii Idaacada VOA- da ee ku hadasha codka Maraykanka iyo TV-ga Universal kaasoo lagu Magacaabo Nuux Muuse Birjeeb.
Talaabadan marka la eego waxa ay tahay mid caburineysa xuquuqda ay xarunta warbaahineed u leedahay baahinta warar ku dhisan dhex dhexaadnimo iyo sugnaan.
Inta badan kooxaha sida fudud ku hanta qaab hogaaminta bulsho ee aqoonta iyo waaya aragnimada fiican aan laheyn, waxa ay ku maan wareeraan qaab howleedka warbaahinta iyagoona iska dhaadhicya in ay waajib tahay warbaahinta codkooda in ay ku hadasho hadii kalana ay cadaadis dul saaran, taasina waxaa marqaati nooga filan inta suxufi oo iyaga oo ku jira howshooda warbaahineed ku mudatay dil, Dhaawac, handadaad iyo masaafurin.